Etu ị ga - esi zụọ ahịa ma kwalite ihe omume gị na ntanetị | Martech Zone
Anyị edeela na mbụ otu esi eji ya mgbasa ozi mgbasa ozi iji zụọ ihe omume gị ọzọ, na ọbụna ụfọdụ nkọwa akọwapụtara etu esi eji Twitter iji kwalite ihe omume. Ọbụna anyị ekerịtala lukpụrụ maka ahịa ihe omume.
a ozi si na DataHeroOtú ọ dị, na-enye ụfọdụ nkọwa dị egwu na iji email, mkpanaka, ọchụchọ na mmekọrịta mmadụ na ibe iji kwalite na ịzụ ahịa ihe omume gị.
Ime ka ndị mmadụ gaa mmemme gị abụghị naanị ịme ihe omume ahụ n'onwe ya dị egwu, ị ga-ere ya n'ụzọ ziri ezi. Ihe omuma ihe omuma a na - enyere gi aka site na omume kacha mma banyere otu esi ere ahia gi na ntanetị, site na ire ahia email, na mmekorita ndi mmadu, iji nyochaa njikarịcha ihe.
Ndị a bụ ụfọdụ gosipụtara omume kachasị mma na ire ahịa gị n'ịntanetị
email Marketing - Jiri ihe onyonyo na ozi ịntanetị na-emegharị maka ọnụọgụ ndebanye aha.
Mobile Marketing - Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndebanye aha na-eme na ekwentị mkpanaaka wee hụ na ibe ndebanye aha gị kachasị maka nlele mkpanaka.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta - Na-ebuli peeji mmemme gị maka isi okwu bara uru ma rụọ ọrụ iji gbalịa ịchọta site na saịtị ndị ọzọ dị mkpa opekata mpe izu 4 tupu mmemme gị iji gbalịa ịkwado ya nke ọma.
Social Media Marketing - mepụta hashtag pụrụ iche ma gbaa ume itinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta tupu na n'oge ihe omume gị na ụfọdụ nyocha mgbe ọ gasịrị.
Tags: omume kacha mmaomumemmemme ahiaomume kacha mma omumeomume email ahia kacha mmankwalite ahia ahiaomume mobilemarketing mobile omumemmemme nyochanjikarịcha ihe njin nchọta iheihe omume seoiheotu esi eweputa ihe omume gi na ntanetịotu esi akwalite mmemme na ntanetịonline omume ahịaihe omume ntanetị n'ịntanetị
Mgbasa ozi vidio vidio dị na akụkọ na-enweghị ọrịre